Block Machine, Wosenza Block Ikubumbe, eziphathekayo Block Splitter - Qunfeng
I-imeyile: trade@qunfeng.com Phone: + 86-13959797683
Imveliso ye-AAC block Production
Umatshini weTayile weTerrazzo
Qunfeng Okrelekrele Machinery Co., Ltd.
Nendlela iminyaka engaphezu kwama-20 sizingise, edibanisa kusenokuthetha profundity ngeteknoloji eziphakamileyo, qunfeng uye wadala ummangaliso abenzi kumatshini ekwenziweni block anokubanakho mda.
Nendlela iminyaka engaphezu kwama-20 sizingise, edibanisa kusenokuthetha profundity ngeteknoloji eziphakamileyo, qunfeng uye wadala ummangaliso abenzi kumatshini ekwenziweni block anokubanakho mda. Kwaye abe umthengisi kakuhle ekhethiweyo abathengi avela kwelaseAsiya, eMelika, iYurophu kunye Afrika, kuba ngaphandle nonesuch ye-Chinese Block abenzi Machine.
Cement Brick Making Matshini ne CE Certificate
Qunfeng Roof Tile Machine yoMvelisi
Full Zenzekelayo eziphathekayo Brick Making Machine \_ A ...
Electric Cleaning enamasondo
Rudi Truck ne Detachable Uphawu / kwenkunkuma ...
Qunfeng Electric Sweeper / Road Sweeper / Ukucoca ...
Ezijongene nemiba ngemiba yezemfundo yokutshayela wokuhlamba iimpahla Truck
Isiseko sokuvelisa kunye 215.000 ndawo ㎡
Over Iqela 100-Persons R & D
Ngaphezu kwama-200 patent kazwelonke
Ngaba zithunyelwa kumazwe 110 nemimandla
HAMBA ukubambana ngezandla
inkqubo Global ezintsha
Iziko Uphando kunye nophuhliso
Ngokusekelwe kwiinkcukacha big kubaxhasi ngaphezu kwama 8,000 kumazwe 110 kunye nemimandla, Qunfeng iye yakwazi ukulandelela okwixesha-lokwenene idatha emarikeni zakutshanje ukuze nazi customers'demand ngcono.
Qunfeng ibuthe iingcali phezulu apha ekhaya nakumazwe aphesheya, umisele amaziko 3 R & D, Walizinzisa ubambiswano isandi enobuchule zezifundiswa eyaziwayo ezininzi R & namaziko D
inkqubo Global production
Oomatshini Better zivela amandla lemveliso ezizodwa intelligentized Qunfeng ekhethiweyo kakuhle abathengisi intlawulo ehlabathini zombini izinto ekrwada kunye namalungu nanceba, ukuqinisekisa yonke inxalenye olunye umatshini block kufuneka zifike-kumgangatho wehlabathi umgangatho umgangatho, koko kwikhonkco ndise jikelele yenza Qunfeng ukukhuphisana ngaphezulu olunye yesondlo. Okunye
ITekhnoloji yeMveliso yeHlabathi
Technologies 6 imveliso engundoqo phezulu / ethe ngqo / Zero siphene
Qunfeng Iyakwazi technologies yokuvelisa undoqo nto leyo kuphela ukudala umgangatho umatshini games izitena izigqibo ezikrelekrele. Ngoko ke, ifakwe umgca uboniso ngokupheleleyo imveliso unyango ubushushu, Qunfeng iye yakwazi ukuqinisekisa ukomelela component.And zonke single phakathi technologies 6, nokuba ifayibha ukusika okanye iteknoloji CNC, bonke bakhonza ukuze kuqinisekwe ngendlela sokugqibela yonke candelo. Okunye
inethiwekhi Global zokumaketha
Inethiwekhi zentengiso Global kunye nentsebenziswano ezintsha izisombululo
Qunfeng linike izixhobo kakuhle kwaye ezikrelekrele ngaphezulu kwe 8000 abathengi abavela kumazwe 110 kunye nemimandla kwihlabathi liphela.
Qunfeng uye wamisa 24 ofisi basekhaya 7 ofisi phesheya egubungele kumazwekazi 6 leyo eyenza ukuba ikwazi ngokunika impendulo ekhawulezileyo kunye nenkonzo eliphezulu esebenzayo imveliso-high speed kwaye ngokunjalo luyazigwagwisa intembeko kunye yokuqinisekisa kwiinkampani zokuvelisa izinto zokwakha phezulu ehlabathini lonke. Okunye
Inkonzo Global nokhathalelo
7x24 iiyure emva-intengiso
inkonzo kwenza "zero kumgama"
jikelele inkqubo ekukhutshweni yenza Qunfeng sebenzisana ngamazwe ezigqwesileyo ukuze creat ikhonkco ngokunikezela jikelele, ngoko naphi na umthengi, Qunfeng Mhlanguli kunoqoqosho kakhulu kwaye Ukugunda emva-intengiso nokugcinwa .
GET IINDABA high QUNFENG
Nendlela iminyaka engaphezu kwama-20 sizingise, edibanisa kusenokuthetha profundity ngeteknoloji eziphakamileyo, qunfeng uye wadala ummangaliso abenzi kumatshini ekwenziweni block anokubanakho mda. [..]
iimilo Machine oluzenzekelayo yokukwazi Block Ukwenza , Isichumisi Powder Wosenza Brick Ukwenza Machine , umatshini wokwenza block , oluzenzekelayo Brick Ukwenza Machine ,